ePaschim Today ड्रिम फाप्ला : समृद्धि र क्रिकेट विकास पथ
सन् २०१४ को विश्वकप ब्राजिलमा आयोजना भयो । ७ लाख नयाँ रोजगारी सृजना भयो । ३७ लाख आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले १ महिनामा साढे २ अर्ब रmपैया ब्राजिलमा खर्च गरे । आज ब्राजिल र फुटबल पर्यायवाची शब्द जस्ता भएका छन् । फुटबलले पहिचान फराकिलो बनाएको छ । जब कुरो फुटबलको हुन्छ, ब्राजिलका सम्पूर्ण जनता एकजुट भैहाल्छन् । सोही कारण ब्राजिल ५ पटकसम्म विश्व विजेता बन्यो । ब्राजिल फुटबल एउटा खेल मात्र होइन, धर्म हो, संस्कृति होे, समृद्धि हो, एकता हो ।
अब हामी ब्राजिलबाट सिधै नेपालको यात्रामा लागौं । त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम कैलालीको सहर धनगढीमा । यो करिब १ लाख ५० हजार जनसंख्या भएको उपमहानगरपालिका हो । जहाँबाट उदय हुदंैछ, नेपालमा क्रिकेटको नयाँ युग । जहाँबाट क्रिकेटले यस्तो बाटो कोरी रहेको छ, जसले धनगढीलाई मात्र होइन, सुदूरपश्चिमलाई मात्र होईन सिङ्गो नेपाललाई विकास र समृद्धिको नयाँ पथमा डोर्याउदैछ । उद्देश्य लिनु के उडी छुनु चन्द्र एक । ठूलो सपना देखे पछि नै त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो खुल्छ । हामीले पनि ठूलो सपना देखेका छौ । धनगढीमा ४० हजार दर्शक क्षमताको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने । यो मेरो मात्र सपना होइन, यो सम्पूर्ण सुपबासीको सपना हो । यो देशको सपना हो, यस सपनाको नाम मैले ड्रिम फाप्ला राखेको छु । यो सपना म हरकही सुनाई रहेको छु । हरकोहीलाई बाडी रहेको छु । यो एउटा सपना मात्र होइन विकासको पथ हो, यो समृद्धिको क्रिकेटपथ हो ।
कसरी सुरm भयो त यो पथ ? खेलकुद प्रति सानै उमेर देखि लगाव थियो र क्रिकेटमय माहोल थियो हाम्रो टोल र धनगढीमा । क्रिकेटप्रति लगाव बढ्दै गयो । खेल्न पनि सुरु गरे । पढ्ने क्रममा काठमाण्डौं लागियो । पढाइ सकेर सन् २०१० मा धनगढी फर्किएँ, हामी स्कुल पढ्दा क्रिकेट खेल्ने मैदान तिर हानिए, क्रिकेट खेलेको दृश्य देखे, तर खुशी चाही पटक्कै भएन्, किनभने जिन्स पाइन्ट लगाएर खाली टाईमपास पासको लागि मात्र क्रिकेट खेली रहेको दृश्य थियो । १० वर्षको जनयुद्वले खेलकुद क्षेत्र धेरै पछाडि धकालिएको थियो । क्रिकेट अछुतो रहेन कुरै भएन् ।
बाल्यकाल छँदा क्रिकेटको जुन महोल धनगढीमा थियो, त्यो आफू सामु नदेख्दा चित्त बुझेन । सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भनेर सन् २०१० मै एसपीए कप अन्तर कलेज क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु गर्ने योजना ग¥यौ । विजेता हुने टोलीलाई रु. २५ हजार नगद पुरस्कार दिने घोषणा गर्दा सम्भव छ र ? भन्ने पनि थिए त्यति खेर । आर्थिक व्यवस्थापन गर्न १० हजारको एउटा प्रायोजक ब्यानर माग्दा १० कुरा सुनाउनेहरु पनि भेटिन्थे तर जसोतसो सानो तिनो सहयोग जुटाएर प्रतियोगितालाई हामीले सफल बनायौ । त्यसपछि यात्रा कहिल्यै रोकिएन्, निरन्तर ठूलो र प्रभावकारी बन्दै गयो, धनगढी क्रिकेट एकेडेमीको स्थापना ग¥यौ । धनगढी क्रिकेट लिग जस्ता प्रतियोगिता सँगै थुपैै्र गतिविधिहरु निरन्तर संचालन हुन थाले ।
सन् २०१५ मा चौथो संस्करणमा आउँदासम्म एसपीए कप नेपालकै सर्वाधिक ठूलो प्रतियोगिता भैसकेको थियो । यस बीचमा हामीले दुईवटा महत्वपूर्ण एजेन्डालाई अगाडि सा¥यौ । धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने र धनगढीलाई क्रिकेटको सहरको रुपमा देश विदेशमा चिनाउने, आजको मितिमा यी दुबै अभियानले गति लिई सकेको छ । हिजोसम्म क्रिकेट एउटा खेल मात्र थियो र यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर लागिएको थियो, निरन्तर काम गर्दै जाँदा बुझियो कि, यो त एउटा खेल मात्रै हैन रैछ ।
यो त एउटा यस्तो शक्ति रैछ जसले सिङ्गो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, र देशलाई परिवर्तन गर्न धनगढीमा काम गरे काफी रैछ । सन् २०१७ मा एसपीए कप र धनगढीलाई मर्ज गरी नेपालमै पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरमै अक्सन (खेलाडीमा बोलकबोल) माध्यमबाट सहरको नाम र आकर्षक पुरस्कार सहित सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी प्रिमियर लिग गर्ने योजना घोषणा गर्दा, प्रतियोगिताले नेपालमा क्रिकेटमा एउटा नयाँ युगको थालनी गरेको अनुभूति सबैले गरे । हिजोका दिन एउटा ब्यानर माग्न थरीथरीका कुरा सुन्नु पथ्र्यो आज जोडिन खोज्नेहरुको भीड छ ।
स्थानीयहरु सहयोग गर्न एकजुट भएका छन् । राष्ट्रिय ब्राण्डहरु पनि जस्तो सुकै सहयोग गर्न पछि परेका छैनन् । आज क्रिकेटले धनगढीलाई देशका अन्य सहरहरु सँग जोडेको छ । देशकै ध्यान धनगढीमा केन्द्रित गरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो काम र हाम्रो अभियान टेलिभिजन, यु ट्युव, फेसबुक र विश्व चर्चित वेबसाइट espncricinfo.com को प्रत्यक्ष प्रशारण र लाइभ अपडेटबाट परिचित बन्यो ।
देशका विभिन्न सहरका नामबाट टिमहरु धनगढी खेल्न आएका थिए र हजारौको संख्यामा खेल अवलोकनका लागि भित्रिएका थिए । धनगढी बजार चलायमान देखिन्थ्यो । आसपासका पर्यटकीय स्थलहरुपनि ब्यस्त देखिन्थे । चाहे खेल अवलोकन गर्न आएका हुन, चाहे खेल्न र खेलाउन, आएकाहरुको अतिथि सत्कार, उनीहरुसँग गरिने व्यवहारमा कही कमि नहोस् भन्ने कुरोमा पनि हामी उत्तिकै चनाखो थियौ । प्रतियोगिताको अन्त्यसंगै यता आगमन गरेर फर्कने्हरुलाई यस क्षेत्रको राम्रो सम्झना लिएर जान र उहाँहरुलाई यस क्षेत्र राजदुत बनाएर फर्काएर पठाउने हाम्रो उद्देश्य थियो । हामी आजको मात्र होइन भविष्यको सोचिरहेका थियौ, छोटकरीमा भन्दा क्रिकेटको माध्यमबाट यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि गर्ने हाम्रो अभियानमा उहाँहरुले बल पु¥याओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । क्रिकेटपथ बाट आर्थिक समृद्धिको कुरो अगाडि आयो। अब डिपिएलबाट ड्रिम फाप्लातर्फ लागौ । ४० हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान जसको न्यूनतम अनुमानित लागत रु. २०० करोड रहेको छ । असम्भव भन्ने शब्द मुर्खको शब्दकोशमा मात्र भेटिन्छ भन्ने सुनिन्थ्यो, साँच्चै हो रहेछ बुझियो । जति ठूलो लक्ष्य त्यत्तिकै सहयोगी हातहरु पनि जुटिरहेका छन्, हामीले बोकेको अभियान र हामीले गरेका कामको असर देशभर नै परिरहेको छ । धनगढीको मोडेल देशको अन्य सहरहरुमा अभ्यास हुन थालेका छन् ।
तस्विर आफै बोल्छ भनेझै अब डीपीएलको महत्व र उद्देश्यका बारेमा सबैलाई थाहा भैसकेको छ । रुस्लाम डीपीएल नेपाली क्रिकेटको महाकुम्भ हो भन्नेकुरा मैले भनिरहनु परेन । क्रिकेटको सहर धनगढीको सृजना, डीपीएल हाम्रो देशलाई क्रिकेटको देश बनाउने महान अभियान हो । हामीले डीपीएललाई पूर्व देखी पश्चिमसम्मका सहरमा आधारित टिम बनाएर देशमा क्रिकेटको माहोल बनाउन खोजेका हौ । क्रिकेट मा बढी भन्दा बढी क्षेत्र र जनताको सहभागिता खोजेका हौँ । क्रिकेटमा देशलाई जोड्न खोजेका हौ । आज देश भर नै क्रिकेटको चर्चा भई रहेछ, क्रिकेटको माहोल बन्दैछ । क्रिकेटमा देश जुट्दै गएको छ । यसरी क्रिकेट माहोल तातेको देख्दा कुन नेपाली खुसी न होला । डीपीएलले आइसीसीबाट मान्यता पाउदा टीम डीपीएलको उत्साह आकाशिएको छ । यो हामी सबैका लागि अभूतपूर्व सफता र सुखद कुरा हो ।
नेपाली क्रिकेटको जिम्मेवार निकाय क्यान अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा क्रिकेटका महानायक पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको टीमले ओडीआई मान्यता प्राप्त गरि अभुतपूर्व चमत्कार गरेको छ । राष्ट्रिय टीम र मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटाज्यू लाई मुरी मुरी बधाई ज्ञापन गर्दछु । हामीले २०३० सम्ममा विश्वकप चुम्ने लक्ष्य बनाऔँ । त्यसका लागि राष्ट्रिय अन्तरर्राष्ट्रिय स्टेडियम बनाऔँ । राष्ट्रिय र अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता खेल्ने वातावरण बनाऔँ । मलाई विश्वास छ २०३० सम्म वल्र्ड कप खेल्न होइन चुम्न सकिन्छ । यसबाट स्वाभाविक रुपमा नेपाली युवाहरुमा क्रिकेटको क्रेज बढ्ने छ । तब हरेक युवाको प्रमुख लक्ष्य क्रिकेटर बन्ने हुनेछ । अभिभावकको उद्देश्य आफ्ना सन्तानलाई क्रिकेटर बनाउने हुनेछ । यो सम्भव छ । इच्छाशक्ति चाहिन्छ असम्भव भन्ने केही छैन तर क्रिकेटलाई उच्च प्राथमिकतामा नपारी यो महान उद्देश्य प्राप्त हुन सक्तैन । त्यसैले म क्रिकेटलाई राष्ट्रिय गौरवको खेल घोषणा गरी खेल मैदानहरु र अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला निर्माण गर्न सरकारसंग जोडदार माग राख्दछु ।
खेलमा राष्ट्रियभावलाई जगाउने र देशमा समृद्धि गर्ने अदभुत शक्ति छ । यसैले म यस अवसरमा केन्द्र, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज , सबैमा नेपालमा संभावनाको खेलका रुपमा उदाएको क्रिकेटको विकास र समृद्धिमा तन मन र धनले जुट्न, एक हुन जोरदार अपिल गर्दछु ।
फाप्ला अन्तरर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला धनगढीको भाग्य रेखा र प्रदेश न ७ को समृद्धिको आधार हो । त्यसैले फाप्ला अन्तरर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गरी ३ वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न संयुक्त पहल गर्न यहाँको सरकार, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी, संचारकर्मीको ध्यान आकर्षण गर्दछु ।